विदेशमा बस्ने नेपालीले कसरी भोट हाल्ने ? यो जानकारी पढनुस् – Rastriyapatrika
विदेशमा बस्ने नेपालीले कसरी भोट हाल्ने ? यो जानकारी पढनुस्
२० भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत चैतमै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयले अहिले थप चर्चा पाएको छ । संविधानले प्रत्येक वालिग नागरिकको मताधिकार प्रयोगको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अब अदालतको समेत आदेश आइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ युवा पुस्ताका मतदाताले जिम्मेवार सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि गहिरो अध्ययन र पर्याप्त तयारीको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।